Fanamboarana ny crèpe :
Afangaro anaty vilia jobo iray ny lafarinina, ny kakaô, ny sira sy ny siramamy. Arotsaka tsirairay ny atody ary ny dibera efa voatsonika. Araraka ao amin’izay ny ronono matimaty ary afangaro haingankaingana mba tsy hisy mitambaingana. Afanaina ny lapoaly dia asiana dibera kely tapaky ny sotrokely. Araraka ny paty, tsy atao matevina be nefa tsy manify loatra koa. Avadika ka rehefa masaka dia avela ho mendimendy kely. Velarina dia hosorana ilay “pate à tartiner”. Ahorongorona toy ny nem, rehefa vita izay.
Rehefa hanina amin’ny antonony ny sôkôla dia betsaka tokoa ny zava-tsoa entiny ho an’ny fahasalamana. Ny sôkôla mainty no maivana ny tavy sy siramamy ao anatiny.